အဆိုပါ unisex ရပ်ဂ်ဘီချွေးထွက်အင်္ကျီ, အ timeless | ရပ်ဘီဆိုင်: Sexy Rugby
ကြိုဆို » timeless အဆိုပါချွေးထွက်ရပ်ဂ်ဘီ unisex,
ယခုတပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ကနေတချို့ဂုဏ်အသရေ key ကိုအပိုင်းပိုင်းထား sexy Rubgyအဆိုပါ unisex ချွေးထွက်ရပ်ဂ်ဘီလိုပဲ။ ဤသည်အထည်ချုပ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးတစ်ပါးပျဉ်းနှင့်သင့်လျော်အတူပေါ့ပါးထိပ်တန်းဖြစ်ပါတယ်။
ယင်း၏စနစ်တကျအင်္ကျီလက်နှင့်အတူ, သူတို့ wearer များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်မှဿုံလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။ အဆိုပါချွေးထွက်၏ပစ္စည်းကိုဝါဂွမ်း (60%) နှင့် polyester (40%) ဖြစ်ပါတယ်။ အများအပြားကအရောင်များကိုတစ်ဦးချင်းအရသာဖြည့်ဆည်းဖို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအနက်ရောင်ကျောက်မီးသွေး, mottled ပြာ, mottled ပန်းရောင်မုန့်, မီးခိုးရောင် marl နှင့် marl ရေတပ်သည်။ XS, S, M, L, XL နှင့် XXL: ထို့အပြင်ဤချွေးထွက်ကအားလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားများကို fit မှခွင့်ပြု, ခြောက်လအရွယ်အစားအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဖြတ် unisex အားလုံးအချိန်များတွင်နှစ်သိမ့်ဝတ်ထားသေချာ။
အားလုံးသင့်ရဲ့ outings အတွက်ပေါ့ပါးပြီးအဆင်ပြေ, ဒီ unisex ချွေးထွက်ရပ်ဂ်ဘီသငျသညျ။ ဤသည်ရပ်ဂ်ဘီအဝတ်အစားကွဲပြားခြားနားသောအခါသမယတွင်, မည်သည့်ရာသီအတွက်ဝတ်ဆင်ထားသည်။ မိမိအမူထူးခြားတဲ့စတိုင်ကသင့်ရဲ့ဗီရိုထဲမှာရှေးခယျြမှုအပိုင်းအစစေသည်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါအင်္ကျီလက်နှင့်သူမ၏ပါးပျဉ်း၏ပနျးပှားကိုမြှမွေး၏ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အဝတ်၏ကျန် / m²ပျော့နဲ့အလင်းထည် 240 ဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘဏ်များခါးနှင့်အင်္ကျီလက်မှပွင့်လင်းကြသည်။ ယောက်ျားနှင့်အဟောင်းအမြိုးသမီးမြားအဘို့အသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား။
ဆိုင် Sexy ရပ်ဘီ၏ချွေးထွက်ဝတ်ဆင်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
အကယ်စင်စစ်ဤသူချွေးထွက် sexy ရပ်ဘီ Unisex တစ်ဦးကသင်၏အားကစားဘို့ကောင်းတဲ့ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်တစ်ခုသို့မဟုတ်စတိုင်အရည်အသွေးကိုအဝတ်ရိုးရှင်းစွာအနီးကပ်နောက်လိုက်လုပ်! ရိုးရှင်းတဲ့ကြည့်ဘို့ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် Sneaker အတူကပေါင်းစပ်ဖို့ပဲ, ထို့နောက်သူကဝတ်ဆင်ရန်။ သင်တို့သည်လည်းဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ထိရောက်သောနှစ်ဦးစလုံးဆန်သောမတ်မတ်ဖန်တီးရန်ပြေးရတာအတူကပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးနှစ်သင်တို့သည်ငါတို့၏ကဲ့သို့တစ်ရှပ်အင်္ကျီကိုကျော်ပါကဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ် ရပ်ဘီရှပ်အင်္ကျီအမျိုးသားများအတွက်ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့ ရပ်ဂ်ဘီရှပ်အင်္ကျီအမြိုးသမီးမြား!
"Boxer retro လူတို့, Sexy ရပ်ဘီအားဖြင့်ဂန္
အမြိုးသမီးမြားအတှကျရပ်ဂ်ဘီရှပ်အင်္ကျီ, သင့်ဗီရိုတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှု "